UJesús Maeso de la Torre: «Lo ngumsebenzi kwaye akukho misisi» | Uncwadi lwangoku
UJesús Maeso de la Torre: "Lo ngumsebenzi wobugcisa kwaye ii-muses azikho"
Ukufota: UJesús Maeso de la Torre. Iprofayile kaFacebook.
NguYesu Maeso de la Torre Le yenye yeembekiselo zam ezinkulu zembali. Incwadana yakhe yokuqala, Ilitye lesipheloInomdla kum kwaye ndiyilandele ngokuzinikela ukusukela ngoko. Emva kwexesha kwafika izihloko ezinje, phakathi kwezinye, Comanche, Ibhokisi yamaTshayina, Ikhoboka laseManila, Iinyembezi zikaJulius Caesar. Eyokugqibela yile ioli.
Namhlanje ndinike oku udliwano ndlebe que Ndiyabulela kakhulu ngobubele babo, ukuzinikela kunye nexesha. Beka ifayile ye- colophon kolu ngcelele lwababhali baseSpain bohlobo lwembali.
UDLIWANO-NDLEBE NOJESÚS MAESO DE LA TORRE
UJESÚS MAESO DE LA TORRE: Incwadi yokuqala endiyifundileyo, yayingeyiyo i-TBO Umonki woonongendi baseYustengaphezulu UJuan waseOstriya —UJeromín— nomlawuli uCarlos V. Umbhali wayo wayenguye ULeandro Herrero kwaye yaphawula ukuthanda kwam uncwadi.
Ibali lokuqala endilibhalileyo, elathi kamva lahlelwa ngu-Edhasa, lalinjalo Ilitye Lokuphelela, kwimfazwe yenkosi yaseScots URobert bruce kubukumkani baseNasrid baseGranada.
I-JMT: Zininzi, kodwa eyona ndiyikhumbula kakhulu yile Bomarzo, ukusuka kwiplatense UManuel Mujica LaínezNgaphandle kwembali yebali le-Italian Renaissance Duke, iprozi yakhe, egcwele ubumnandi, ubuhle, umculo kunye nostalgia, yingxelo elumkileyo yempucuko yaseYurophu, efundisa ukuyibhala.
Njengeencwadi, baninzi ababhali abandonwabisayo: UJohn Willians, uVargas Llosa, uBlasco Ibáñez, uTom Holand, uJuan Eslava, uPhilipp Meyer kunye no-Emilio Lara. Ukufunda amabali abo kuyandiphumza kwaye kundisa kwihlabathi lokucinga elindisindisa kwinyani engwevu.
Andithandabuzi: Ukoyikeka UJorge de BurgosUnolayibrari oyindida we Igama le rose. Kwaye kwakhona UJohn Silver, umphathi wepirate Isiqithi sobuncwane.
Hayi ngakumbi, kodwa Ndidla ngokucoca idesika ngaphambi kwaye ubeke ezinye umculo ongasemvaNokuba yeyiphi na indlela, nangona ndikhetha ifayile ye- yamandulo okanye i-polyphonic.
Ihlala ivuliwe Igumbi lam (Andithumeli, kuba andithengisi nto), endigcwele ziincwadi, izixhobo zokubhala kunye namakhulu eetheyiphu, iidiski neeCD ngalo lonke ixesha. Ndonwabile kuphela kubo. Okomzuzwana, nabani na. Lo ngumsebenzi kwaye akukho misi, kuphela ngumsebenzi, ukuzinikela nothando loncwadi.
Ngenxa yoqeqesho lwam lwakudala, sonke sibabona kubalulekile kwaye bandincedile ndafunda. Ndinyanisa: I-Lazarillo de Tormes, IQuevedo, Gongora, UGarcilaso, lope, ingawenzi okanye iRojas, ngaphandle kokulibala iiklasikhi ezinje Homer, Virgil, Horacio okanye uIsidoro waseSeville.
AL: Uhlobo lwakho oluthandayo ngaphandle kwembali?
Ngaphandle kwamathandabuzo inoveli emnyama, endihlala ndibandakanya kwiibali zam, kunye ye midlalo bayo yonke iminyaka. Ndiyayithanda i- ibali elingeyonyani.
Ndiyagqibezela Stoner, NguJohn Willians. Unomdla kakhulu kwaye unomdla malunga noprofesa waseyunivesithi e-USA.
Ndiyasebenza Ibali elibekwe kubukhosi baseByzantium, apho kuyimfuneko ukwakha inzululwazi ye-archeology enzulu.
Ndiqikelela, ngayo yonke intlonipho kwabo babhalayo, ukuba ukuthozama kulahlekile ukubanjwa kokuqinisekisa abahlobo bakhe ukuba ubhale incwadi, kwaye baphosa nantoni na. Ndalinda ndade ndaneminyaka engamashumi amane ubudala ukuba ndibe nayo ukukhula ngokwaneleyo ukubhala, kwaye rhoqo ngentlonelo engenakuthetheka ukupapasha. Ngamanye amaxesha abapapashi basasaza, bezama ukufumana oyena mthengisi ufanelekileyo, kwaye bapapasha iincwadi ezinyanyekayo, ngababhali abangazifundanga kwaphela.
Ubuncinci ndibuyile ixesha le nwabele eyona nto ndiyithandayo: ukufunda, kwaye ndishiye i lungiselela iiprojekthi ezintsha uncwadi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » UJesús Maeso de la Torre: "Lo ngumsebenzi wobugcisa kwaye ii-muses azikho"
Ihlathi liyalazi igama lakho